Feldene (ဖဲလ်ဒင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Feldene (ဖဲလ်ဒင်း)
Feldene (ဖဲလ်ဒင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Feldene (ဖဲလ်ဒင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Feldene (ဖဲလ်ဒင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Feldene မှာ Piroxicam ပါဝင်ပြီး အဆစ်ယောင်ရောဂါကြောင့် ခံစားရတဲ့ နာကျင်မှု၊ ယောင်ယမ်းခြင်းနှင့် အဆစ်များတောင့်တင်းခြင်းတို့ကို လျော့ကျစေဖို့ သုံးနိုင်ပါတယ်။
Feldene (ဖဲလ်ဒင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆရာဝန်ညွန်ကြားထားတဲ့ ပမာဏအတိုင်း၊ အချိန်အတိုင်း ပါးစပ်မှ သောက်လို့ရပါတယ်။
ဆေးမသောက်ခင် အညွှန်းစာရွက်ကို သေချာဖတ်သင့်ပါတယ်။
ဆေးအညွှန်းကို သေချာနားမလည်လျှင် သေချာနားလည်တဲ့အထိ ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
Feldene (ဖဲလ်ဒင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Feldene ဆေးကို ကို နေရောင်နှင့်အစိုဓါတ် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့စေမယ့် နေရာကရှောင်ပြီး အခန်းအပူချိန်မှာ ထိန်းထားတာက အကောင်းဆုံးပါ။ ဆေးပျက်ဆီးတာကို ကာကွယ်ဖို့ ဆေးကို ရေချိုးခန်းနှင့် ရေခဲသေတ္တာအခဲအကန့်ထဲ သိမ်းတာကို ရှောင်ရပါမယ်။ Feldene ဆေးအမျိုးပေါင်းများစွ ာရှိနေနိုင်ပါတယ်။
သိမ်းတဲ့နေရာကိုသိဖို့ ဆေးအခွံပေါ်က အညွှန်းကိုဖတ်ခြင်း၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးခြင်း ပြုလုပ်ပါ။ ဘေးကင်းစေဖို့ ဆေးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိများနှင့် ဝေးရာတွင်ထားပါ။
Feldene (ဖဲလ်ဒင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Feldene ဆေးကိုမသုံးမီ ဒီအခြေနေတွေရှိပါက ဆရာဝန်ကို ပြောထားသင့်ပါတယ်။
အရင်က Feldene ပါသောဆေးသုံးထားပြီး Feldene နဲ့ဓါတ်မတည့်ခြင်း။ ဒီအချက်ကို လက်ကမ်းစာစောင်မှာ အသေးစိတ်ရေးထားပါတယ်။
တခြားကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့် Feldene နဲ့ဓါတ်ပြုတဲ့ အောက်ပါဆေးဝါးများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Feldene (ဖဲလ်ဒင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်တွေ Feldeneဆေးသောက်တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လုပ်ထားတဲ့ လုံလောက်တဲ့လေ့လာမှုမရှိပါဘူး။ Feldene ဆေးရဲ့ ကောင်းကျိုးနဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို ချိန်ဆဖို့အတွက် ဆေးမသောက်ခင်မှာ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ အမေရိကန် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကပ်မှုဌာန ( FDA) က ဖော်ပြထားချက်အရ Feldeneဆေးဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေမှာ ဘေးဖြစ်နိုင်တဲ့ အဆင့် ( C )နေရာမှာ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Feldene (ဖဲလ်ဒင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
တခြားဆေးတွေလိုပဲ Feldene ဆေးမှာလည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ တော်တော်များများက တွေ့ရနည်းပြီး ဘာကုသမှုမှ ခံယူဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆေးသောက်ပြီး ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပါက ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
အစာအိမ်နာခြင်း၊ ရင်ပူခြင်း သို့မဟုတ် ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ဝမ်းသွားခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း
မူးဝေခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အာရုံထွေပြားခြင်း
အရေပြားများ ယားယံခြင်း သို့မဟုတ် အင်ပြင်ထခြင်း
ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊ စကားမပီခြင်း ၊ အမြင်အာရုံပြဿနာဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ဟန်မညီခြင်း
အမဲရောင် သွေးပါသောဝမ်း သို့မဟုတ် ကတ္တရာစေးရောင်ဝမ်းသွားခြင်း
ကော်ဖီမှုန့်ရောင်အန်ခြင်း သို့မဟုတ် ချောင်းဆိုးသွေးပါခြင်း
အော်ကလီဆန်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ ကိုယ်ငွေ့ငွေ့ပူခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်း၊ ဝမ်းအရောင်ဖျော့ခြင်း၊ အသားဝါခြင်း
ဖျားခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် အရေပြားတွင် အရည်ကြည်ဖုပေါက်ခြင်း၊ အရေခွံကွာခြင်းနှင့် နီရဲခြင်း
ညိုမဲစွဲခြင်း၊ ထုံကျဉ်ကိုက်ခဲပြီး ကြွက်သားများ အားနည်းခြင်း
ဖျားခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဇတ်တောင့်တင်းခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ အလင်းရောင်မခံနိုင်ခြင်း၊ အရေပြားပေါ်အနီစက်များထခြင်း သို့မဟုတ် တက်ခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Feldene (ဖဲလ်ဒင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Feldene ဆေးက သင်သုံးနေတဲ့ ဆေးနဲ့ ဓါတ်ပြုပြီး ဆေးအာနိသင်ပြောင်းခြင်း၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပိုဖြစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဆေးဓါတ်ပြုမှုကို ရှောင်ဖို့အတွက် သင်သုံးနေတဲ့ ဆေးများ (ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသောဆေး၊ ကိုယ့်ဘာသာသောက်နေတဲ့ဆေး၊ တိုင်းရင်းဆေး) အားလုံးကို စာရင်းလုပ်ထားပြီး ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို ပြသသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဘေးကင်းမှုအတွက် ဆေးတွေကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် သောက်ခြင်း၊ ရပ်ပစ်လိုက်ခြင်း နှင့် ဆေးပမာဏပြောင်းခြင်းကို မလုပ်ပါနဲ့။ဥပမာ – such as: Ketorolac; Abciximab; Anagrelide; Apixaban; Ardeparin; Argatroban; Beta Glucan; Bivalirudin; Ceritinib; Certoparin; Cilostazol; Citalopram; Clopidogrel; Clovoxamine; Cyclosporine; Dabigatran Etexilate; Dabrafenib; Dalteparin; Danaparoid; Desirudin; Dicumarol; Dipyridamole; Duloxetine; Enoxaparin; Eptifibatide; Erlotinib; Escitalopram; Femoxetine; Feverfew; Flesinoxan; Fluoxetine; Fondaparinux; Ginkgo; Gossypol; Heparin; Lepirudin; Levomilnacipran; Meadowsweet; Methotrexate; Milnacipran; Nadroparin; Nefazodone; Nitisinone; Parnaparin; Paroxetine; Pemetrexed; Pentosan Polysulfate Sodium; Pentoxifylline; Pralatrexate; Prasugrel; Protein C; Reviparin; Rivaroxaban; Sibutramine; Tacrolimus; Ticlopidine; Tinzaparin; Tirofiban; Venlafaxine; Vilazodone; Vortioxetine; Zimeldine; Acebutolol; Acenocoumarol; Acetohexamide; Alacepril; Alprenolol; Amiloride; Amlodipine; Anisindione; Arotinolol; Atenolol; Azilsartan Medoxomil; Azosemide; Befunolol; Bemetizide; Benazepril; Bendroflumethiazide; Benzthiazide; Bepridil; Betaxolol; Bevantolol; Bisoprolol; Bopindolol; Bucindolol; Bumetanide; Bupranolol; Buthiazide; Candesartan Cilexetil; Canrenoate; Captopril; Carteolol; Carvedilol; Celiprolol; Chlorothiazide; Chlorpropamide; Chlorthalidone; Cilazapril; Clopamide; Cyclopenthiazide; Delapril; Desvenlafaxine; Dilevalol; Diltiazem; Enalaprilat; Enalapril Maleate; Eprosartan; Esmolol; Ethacrynic Acid; Felodipine; Fluconazole; Flunarizine; Fosinopril; Furosemide; Gallopamil; Gliclazide; Glimepiride; Glipizide; Gliquidone; Glyburide; Hydrochlorothiazide; Hydroflumethiazide; Imidapril; Indapamide; Irbesartan; Isradipine; Labetalol; Lacidipine; Landiolol; Levobunolol; Lidoflazine; Lisinopril; Lithium; Losartan; Manidipine; Mepindolol; Methyclothiazide; Metipranolol; Metolazone; Metoprolol; Moexipril; Nadolol; Nebivolol; Nicardipine; Nifedipine; Nilvadipine; Nimodipine; Nipradilol; Nisoldipine; Nitrendipine; Olmesartan Medoxomil; Oxprenolol; Penbutolol; Pentopril; Perindopril; Pindolol; Piretanide; Polythiazide; Pranidipine; Propranolol; Quinapril; Ramipril; Sotalol; Spirapril; Spironolactone; Talinolol; Tasosartan; Telmisartan; Temocapril; Tertatolol; Timolol; Tolazamide; Tolbutamide; Torsemide; Trandolapril; Triamterene; Trichlormethiazide; Valsartan; Verapamil; Xipamide; Zofenopril.
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Feldene (ဖဲလ်ဒင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Feldene ဆေးက အရက်၊ အစားအသောက်များနဲ့ ဓါတ်ပြုပြီး ဆေးအာနိသင်ပြောင်းခြင်း၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပိုဖြစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆေးမသုံးခင် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို သင်စားနေတဲ့ အစားအသောက်နှင့် အရက်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Feldene (ဖဲလ်ဒင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Feldene ဆေးက သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါက သင့်ကျန်းမာရေးကို ပိုဆိုးစေနိုင်သလို ဆေးအာနိသင်ကိုလည်း ကျစေနိုင်ပါတယ်။ သင်လက်ရှိခံစားနေရတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာကို ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို ပြောပြဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ဥပမာ –
နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရမှု (Heart Attack) ဖြစ်ဖူးထားခြင်း
နှလုံးရောဂါ( ဥပမာ – နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ)
Aspirin နှင့်မတည့်သော ရင်ကြပ်ရောဂါဖြစ်ဖူးခြင်း
နှလုံးခွဲစိတ်ထားခြင်း (e.g., coronary artery bypass graft [CABG] surgery;
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Feldene (ဖဲလ်ဒင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အရိုးအဆစ်ယောင်ရောဂါအတွက် လူကြီးတယောက် သောက်နိုင်သော ပမာဏ – ၂၀မီလီဂရမ် အနေ့တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် ၁၀မီလီဂရမ် တနေ့ ၂ကြိမ် သောက်ပါ။ ၂၀မီလီဂရမ်ထက် ပိုမသောက်ပါနဲ့။
နာကျင်မှုကို သက်သာရန် (လူကြီး) – ၂၀မီလီဂရမ် အနေ့တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် ၁၀မီလီဂရမ် တနေ့ ၂ကြိမ် သောက်ပါ။ ၂၀မီလီဂရမ်ထက် ပိုမသောက်ပါနဲ့။
အဆစ်ယောင်ရောဂါအတွက် – ၂၀မီလီဂရမ် အနေ့တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် ၁၀မီလီဂရမ် တနေ့ ၂ကြိမ် သောက်ပါ။ ၂၀မီလီဂရမ်ထက် ပိုမသောက်ပါနဲ့
ကလေးတွေအတွက် Feldene (ဖဲလ်ဒင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးတွေကို ဒီဆေးသုံးဖို့ ညွှန်ကြားထားတဲ့ ပမာဏမရှိပါဘူး။ ကလေးတွေသုံးလျှင် ဘေးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဆေးကိုမသုံးခင် ဘေးဖြစ်မဖြစ်ကို သေချာသိဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ ထပ်မံသိလိုသော အချက်များရှိပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် မေးမြန်းပါ။
Feldene (ဖဲလ်ဒင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Feldene ဆေးကို အောက်ပါပုံစံနှင့် ပြင်းအားအတိုင်းရနိုင်ပါတယ်။
ဆေးတောင့်ပုံစံ – ၁၀ မီလီဂရမ်၊ ၂၀မီလီဂရမ်
သွေး သို့မဟုတ် ကော်ဖီအမှုန့်ရောင် အန်ခြင်း
Feldene. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-10963/feldene-oral/details. Accessed October, 20, 2016.
Feldene. https://www.drugs.com/cdi/feldene.html. Accessed October, 20, 2016.
Feldene. http://www.doctissimo.fr/medicament-FELDENE-DISPERSIBLE.htm. Accessed October, 20, 2016.
Feldene. http://www.rxlist.com/feldene-drug.htm. Accessed October, 20, 2016.